Axmad madoobe oo dhaliilay siyaasada beesha habargidir ay dalka ku maamuli doonto (Xog) | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Axmad madoobe oo dhaliilay siyaasada beesha habargidir ay dalka ku maamuli doonto...
Axmad madoobe oo dhaliilay siyaasada beesha habargidir ay dalka ku maamuli doonto (Xog)
Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa shalay khudbad ka jeediyay munaasabad soo dhaweyn ah oo beelaha Hawiye ay Muqdisho ugu qabteen hoggaamiyayaasha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
Axmed Madoobe oo ka hadlay dhawr arrimood ayaa kaftan ku tuuray beesha la siiyay xilka ra’iisul wasaaraha ee Habargidir, oo uu sheegay inuu ka cabsi qabo in muddo kororsi ay u ololeyso si ra’iisul wasaaraha waqti dheeri ah u helo.
Sidoo kale waxuu ka hadlay fikirkii uu ka qabay magaalada Dhuusamareeb, ka hor inta uusan uga qeyb gelin shirarkii Dhuusamareeb 1-2.
“Samareeb “Ex- Dhuusamareeb” baan tagnay, waxaan iri magaaladaas ma dhisna, dadna ma qaadi karto sideen inteena ku tageynaa, waxaa la i yiri, Habargidir intaad shar ku ogeyd kheyr-bey ku badashay adaana arki doona,” ayuu yiri.
Madaxweyne Axmed Madoobe oo hadalkiisa sii watay ayaa yiri, “Markii shirkaan la igu casuumay waxaan iri – war ra’iisul wasaare ayaa la magacaabay, qolo aan xilkaas qaadan jirinna waa la siiyee amey yiraahdaan xoogaa jag hala siiyo, balse waa la isla fahmay sida saaxiibadey sheegeen.”
Ugu dambeyntii Axmed Madoobe wuxuu bogaadiyay maamuuskii loogu sameeyay caasimadda maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb, wuxuuna sheegay in wax weyn uu u arko in beelaha Hawiye ay hadda yihiin kuwa ugu miisaanka culus ee raadinaya dowladnimada Soomaaliya iyo in dib loo midoobo.
Hadalka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa kusoo aadaya, iyadoo dhawaanahaan xildhibaano uu ku jiro Cabdi Qeybdiid oo ay aad isugu dhawyihiin ra’iisul wasaaraha cusub ay Muqdisho ka wadeen olole ay mudo kordhin ugu raadinayaan xukuumadda cusub.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Shaaciyay in uu tanaasulay xili shirkii Muqdisho lagu kala tagi rabay
Next articleXog culus madaxweyne Qoor Qoor oo diiday inu soo faro galiyo moshin barlamanka galmudug ay xilka uga qadayaan Gudoomiye Maxamed Nuur Gacal